Ny fidiram-bolan'ny Vondrona Fraport sivy volana sy ny tombony dia latsaka ambany
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny fidiram-bolan'ny Vondrona Fraport sivy volana sy ny tombony dia latsaka ambany
Fraport dia mampiasa fiara elektrika 500 eo ho eo ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt toa ity fitoeran-kaontenera ity
280 tapitrisa € natokana ho an'ny fepetra hampihenana ny vidin'ny mpiasa - Ny valin'ny asa voarindra (EBITDA) dia mijanona ho miabo hatrany, tohanan'ny fepetra fitehirizana vola - Ny fihenan'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia andrasana mihoatra ny 70 isan-jato mandritra ny taona 2020.
FRA / gk-rap - Nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2020, ny zava-bitan'i Fraport AG dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny areti-mandringana Covid-19. Ny fidiram-bolan'ny Vondrona dia nihena mihoatra ny antsasaky ny fe-potoana nitaterana. Na eo aza ny fepetra fitehirizana vola feno, ny Fraport Group dia nanoratra fatiantoka netina € 537.2 tapitrisa - izay misy ny fandaniana € 280 tapitrisa natokana ho an'ireo fepetra mikendry ny fampidinana ny vidin'ny mpiasa. Ny fifamoivoizana nataon'ny mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) dia nihena 70.2 isan-jato isan-taona, ary 16.2 tapitrisa ny mpandeha nanompo tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Septambra 2020.
Ny talen'ny birao mpanatanteraka ao Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, dia nilaza hoe: Miakatra indray ny tahan'ny aretina manerana an'i Eoropa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, nampiditra indray ny governemanta na nanitatra ny fameperana ny dia. Vao mainka aza mampihena ny fandaharam-potoanan'izy ireo ny sidina. Amin'izao fotoana izao dia tsy manantena ny hisian'ny fanarenana izahay raha tsy farafaharatsiny amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra 2021. Ho valin'izany, manohy manamboatra ny orinasanay izahay mba ho lasa mahia sy hakingana kokoa - hahatratrarana fihenam-bidy maharitra. Mizotra tsara amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany isika. Ny fepetra ampiharina ao amin'ny tobim-ponenanay any Frankfurt dia hanampy antsika hampihena ny vidin'ny mpiasa sy ny fitaovana amin'ny antonony hatramin'ny 400 tapitrisa € isan-taona. Izany dia mifandraika amin'ny 25 isan-jaton'ny vola lany amin'ny asa aman-draharaha rehetra voarakitra ao amin'ny toeran'ny Frankfurt mandritra ny taom-piasana 2019. ”
Vokatry ny vondrona (tombom-barotra) dia miharihary amin'ny faritany ratsy na eo aza ny fihoaram-pefy
Tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny 2020, ny fidiram-bolan'ny vondrona dia nihena 53.8 isan-jato isan-taona hatramin'ny € 1.32 miliara. Ny fanitsiana ny vola azo amin'ny fananganana mifandraika amin'ny fandaniam-bola capacitive amin'ny zanaky ny Fraport manerantany (mifototra amin'ny IFRIC 12), ny fidiram-bolan'ny vondrona dia nidina 53.9 isan-jato hatramin'ny 1.15 miliara.
Ny orinasa dia nampihena ny fandaniana amin'ny fandidiana (misy ny vidin'ny akora, ny fandaniana amin'ny mpiasa ary ny fandaniana amin'ny fandidiana hafa) tamin'ny ampahatelon'ny fe-potoana anaovana tatitra, rehefa avy nanitsy ny fandaniana amin'ny fepetra fampihenana ny mpiasa. Na izany aza, ny valin'ny fandidiana na ny vondrona EBITDA (talohan'ny singa manokana) dia nidina 94.5 isan-jato hatramin'ny € 51.8 tapitrisa. Ny vondrona EBITDA dia nisy fiatraikany tamin'ny fandaniana tamin'ny fepetra fampihenana ny mpiasa mitentina € 280 tapitrisa. Raha raisina ireo fandaniam-bola fanampiny ho an'ny mpiasa, ny vondrona EBITDA nandritra ny sivy volana voalohany tamin'ny 2020 dia nidina hatramin'ny € 227.7 tapitrisa (9M 2019: € ​​948.2 tapitrisa), raha ny vondrona EBIT kosa dia latsaka hatrany amin'ny 571.0 tapitrisa € (9M 2019: € ​​595.3 tapitrisa). Ny valin'ny Vondrona (tombony net) dia nahatratra € 537.2 tapitrisa (9M 2019: € ​​413.5 tapitrisa).
Ny tarehimarika fahatelo (vanim-potoana hatramin'ny volana septambra 2020) dia nanondro mazava fa ny fepetra fampihenana ny vidiny efa voaporofo dia nahomby. Raha mbola ratsy ny vondrona EBITDA tamin'ny telovolana faharoa (mihena € 107 tapitrisa), ny vondrona EBITDA € 29.2 tapitrisa (alohan'ny zavatra manokana) dia tratra tamin'ny telovolana fahatelo. Ny fanarenana vonjimaika ny volan'ny mpandeha dia nandray anjara tamin'io fivoarana io ihany koa. Nandray ny fandaniam-bola natokana ho an'ny fepetra mikendry ny fampidinana ny vidin'ny mpiasa, i Fraport dia namoaka valin'ny Vondrona (na tombom-barotra net) € 305.8 tapitrisa tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny 2020.
Nihena ny fandaniam-bola sy ny vidin'ny tsy mpiasa
Amin'ny alàlan'ny fanafoanana na ny fanemorana ny fampiasam-bola tsy ilaina amin'ny asa, Fraport dia afaka mampihena ny fandaniana vola mitentina € 1 miliara mandritra ny fotoana maharitra sy maharitra. Manokana, io dia manondro ny fampiasam-bola ho an'ireo trano misy terminal sy apron ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Mikasika ny fananganana ny Terminal 3 vaovao, ny toe-java-misy ankehitriny dia manome fotoana ihany koa hanitarana ny fe-potoana takiana amin'ny fepetra fananganana manokana na fanomezana fifanarahana fifanarahana. Fraport dia mikasa ny hanokatra ny Terminal 3 - misy ny tranoben'ny terminal lehibe miaraka amin'i Piers H sy J, ary koa ny Pier G - ho an'ny fandaharam-potoana fahavaratra 2025. Na izany aza, ny tena datin'ny fahavitana sy ny fitokanana ilay terminal vaovao dia hiankina amin'ny fivoaran'ny fangatahana amin'ny farany.
Toy izany koa, ny vidin'ny mpiasa tsy miankina rehetra (ho an'ny fitaovana sy serivisy) dia mihena be - fa ny fandaniam-bola tsy ilaina kosa nesorina. Izany dia midika hoe mitahiry vola avy hatrany hatramin'ny 150 tapitrisa € isan-taona.
Efa mandeha ny programa fanenanana ny mpiasa
Amin'ny alàlan'ny fanapahana asa hatramin'ny 4,000 amin'ny ankapobeny hatramin'ny faran'ny taona 2021, ny vidin'ny mpiasan'i Fraport any amin'ny toerana Frankfurt dia hahena 250 tapitrisa isan-taona. Ity fihenan'ny mpiasa ity dia ho tanterahina ho tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina araka izay azo atao: mpiasa 1,600 eo ho eo no nanaiky ny hamela ilay orinasa ao anaty programa redundancy an-tsitrapo misy fonosana fisarahana, tetika fisotroan-dronono ary fepetra hafa. Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny fifanarahana ara-dalàna amin'ny fisotroan-dronono sy ny fanaovana fihenam-bidy fanampiny, ny mpiasa dia hahena eo amin'ny 800 eo ho eo ny vondrona Nandritra ity taona ity dia asa sahabo ho 1,300 no efa nahena tamin'ny fiovan'ny mpiasa na ny fahataperan'ireo fifanarahana asa vonjimaika.
Mandritra izany fotoana izany, Fraport dia hanohy hiasa drafitra miasa mandritra ny fotoana fohy. Hatramin'ny telovolana faharoa an'ny 2020, hatramin'ny 18,000 amin'ireo olona 22,000 eo ho eo miasa amin'ny orinasa Vondrona rehetra ao Frankfurt dia niasa vetivety, nahitana fihenan'ny 50 isan-jato eo ho eo amin'ny fotoana fiasana, arakaraka ny tinady. Ny habetsaky ny fotoana fohy dia somary nihena nandritra ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra, saingy ny habeny dia miakatra indray mifanaraka amin'ny fihenan'ny fangatahan'ny fifamoivoizana.
Fraport dia nanangona $ 2.7 miliara ho an'ny famatsiam-bola fanampiny mandritra ny taom-piasana ankehitriny. Ny fepetra hanatanterahana izany dia nahitana fatiantoka orinasa 800 tapitrisa tapitrisa € navoaka tamin'ny volana jolay 2020, ary ny fametrahana fanamarihana promissory miaraka amin'ny totalin'ny € 250 tapitrisa tamin'ny oktobra 2020. Noho izany, miaraka amina vola mitentina € 3 miliara mahery ary trosa tsipika, tsara toerana ny orinasa hiatrehana ny krizy ankehitriny ary - na dia amin'ny ambaratonga mihena aza - hanao ny fampiasam-bola ilaina amin'ny ho avy.
Ho an'ny taom-piasana ankehitriny, ny birao mpanatanteraka ao Fraport dia manantena ny fidinan'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ho latsaka ny 70 isan-jato isan-taona amin'ny mpandeha 18 ka hatramin'ny 19 tapitrisa. Ny fidiram-bolan'ny vondrona (namboarina ho an'ny IFRIC 12) dia antenaina hidina hatramin'ny 60 isan-jato raha oharina amin'ny taom-piasana 2019. Vondrona EBITDA (alohan'ny zavatra manokana) dia vinavinaina hihena mafy - saingy mbola mijanona ho miabo tsara ihany, tohanan'ireo fepetra fitehirizana efa namboarina na nomanina. Raha raisina ny fandaniam-bola natokana ho an'ny fepetra kendrena amin'ny fampidinana ny vidin'ny mpiasa, ny vondrona EBITDA an'ny Fraport dia hahatratra tarehimarika ratsy mandritra ny taona 2020. Toy izany koa, ny birao mpanatanteraka dia manantena fa ny vokan'ny Vondrona EBIT sy ny Vondrona (tombom-barotra) dia hitondra fatiantoka lehibe.
CEO Schulte: "Manantena izahay izao fa ny fivezivezin'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny 2021 dia hahatratra 35 ka hatramin'ny 45 isan-jaton'ny haavon'ny 2019 ihany, indrindra noho ny faran'ny volana 2021 efa antenaina indrindra. Na dia amin'ny 2023/24 aza dia mety mbola hahatratra ihany ny isan'ny mpandeha. 80 ka hatramin'ny 90 isan-jaton'ny haavon'ny krizy. Midika izany fa manana dia lavitra be mialoha isika. Na izany aza, izahay dia matoky fa ny fepetra fanoherana vao natomboka vao haingana dia ahafahan'ny Fraport ho voalamina tsara amin'ny làlan-kaleha maharitra amin'ny fitomboana maharitra.